Manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina eny amin’ny faritra 67ha sy ny manodidina iny dia tsy mitsahatra manao fanadihadiana ny Polisy entina hikarohana ireo olon-dratsy minia manaparitaka izany. Nahitam-bokany ny fanadihadiana sy ny fitsirihana natao araka izany. Tokony ho tamin’ny 06 ora sasany hariva moa no niditra tamina tokatrano iray efa narahi-maso ary fantatra fa toeram-pivarotana rongony eny 67ha atsimo ny Polisy. Io vehivavy io no tompon-trano izay tratra niaraka tamin’ny rongony miisa 10 fonosana. Nosamborina avy hatrany ity farany ary tamin’ny fanadihadiana natao taminy dia niaiky ny heloka vitany ity vehivavy ity. Efa natolotra ny fampanoavana ny anaovavy ary naiditra am-ponja vonjimaika.
Legende : Ity ilay Ramatoa mpivarotra rongony